အငျးစိနျထောငျသို့ရောကျရှိနပွေီတဲ့ အဆိုတျောပိုပိုရဲ့ အကွောငျးကိုပွောပွလာတဲ့ မျောဒယျသရုပျတောငျ HU GO – XB Media Myanmar
အငျးစိနျထောငျသို့ရောကျရှိနပွေီတဲ့ အဆိုတျောပိုပိုရဲ့ အကွောငျးကိုပွောပွလာတဲ့ မျောဒယျသရုပျတောငျ HU GO
ပီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီ လ (၁)ရကျနေ့ ကနေ စတငျပွီး မွနျမာနိုငျငံ အတှငျးမှာ ဖွဈပှားနတေဲ့ အခွအေနတှေေေ ကွာငျ့ ပွညျသူတှနေဲ့ နယျ ပယျ အသီးသီးက အနုပညာရှ ငျမောငျနှမတှေ က စဈမှနျတဲ့ ဒီမိုကရစေီ ပွနျလညျရရှိရေး အတှကျ လူထုလှုပျ ရှားမှုတှမှော ပူးပေါငျးပါဝငျ နေ ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ ယခုလို ပွညျသူေ တှနဲ့အတူ လှုပျရှားနကွေတဲ့ အနုပညာရှ ငျတှထေဲမှာ ပိုပိုကလညျး လ မျးမပျေါထှကျကာ အား သှနျခှနျစိုကျ ကွိုး စားခဲ့တဲ့ သူပဲဖွဈ ပါတယျ။
လူထု လှုပျရှား မှုတှမှော ပါဝငျရငျး ၅၀၅(က)ဖွငျ့ ဖမျးဆီး ထိနျးသိမျး ခံရမယျ့ သူတှေ ထဲတှငျ ပါဝငျလာခဲ့တာ ဖွဈပွီး ဧပွီလ (၁၅)ရကျနေ့ တှငျ သူမရဲ့အိမျတှငျ ဖမျးဆီး အရေးယူ ခံလိုကျရတာ ပဲဖွဈပါတယျ။အရငျ ရကျပိုငျးကဆိုရငျ ပိုပိုနဲ့ ပကျသကျပွီး ကောလဟာလ တှကေ ထှကျ ရှိနတော ဖွဈပွီး သူမရဲ့အိမျ ကလညျး အခုခြိနျထိ ဘယျရောကျလို့ ရောကျ မှနျးမ သိသေးတာကွောငျ့ မမှနျတဲ့ သတငျးတှကေို မတငျ ကွဖို့ တောငျးဆိုထား တာလညျး တှရေ့ပါတယျ။
ဒီနေ့ မှာတော့ သူမရဲ့သူ ငယျခငျြးဖွဈတဲ့ မျောဒယျလျ သရုပျဆောငျ Hu Go က “မပို အငျးစိနျထောငျ ရောကျပွီလို့မိသားစုထံမှ သိရကနျြး မာပါ စအေမ 🙏”ဆိုပွီး လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျတှငျတငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျ။”ကနျြးမာရေးမခွေ အနတေော့ မသိရသေးဘူး! သိရရငျပွနျ မြှဝပေေးပါ့မယျ!
But သူက ဘုရားတ ရားသမားဆိုတော့ Will Power ကောငျးတယျ! အဲ့တော့ I HOPE So သူဒီဒဏျကို အသာလေးကြျော လှားနိုငျမှာ ပါ! သူအ တှကျလဲ ဆုတောငျးပေးကွပါအုံး🖤”လို့ သူရဲ့ပို့ဈအောကျတှငျ ပရိသတျတှသေိအောငျ ထပျပွီးရေးသား မြှဝထေားတာ ဖွဈပွီး ပိုပိုရဲ့ ပ ရိသတျေ တှကလညျး ကနျြးမာရေးေ ကာငျးမှနျပွီး အမွနျဆုံး လှတျမွောကျပါစလေို့ ဆုတောငျးထားကွတာပဲဖွဈပါတယျ။
ပီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ လ (၁)ရက်နေ့ ကနေ စတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အခြေအနေတွေေ ကြာင့် ပြည်သူတွေနဲ့ နယ် ပယ် အသီးသီးက အနုပညာရှ င်မောင်နှမတွေ က စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိရေး အတွက် လူထု လှုပ် ရှားမှုတွေမှာ ပူးပေါင်းပါဝင် နေ ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို ပြည်သူေ တွနဲ့အတူ လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ အနု ပညာရှ င်တွေထဲမှာ ပိုပိုကလည်း လ မ်းမပေါ်ထွက်ကာ အား သွန်ခွန်စိုက် ကြိုး စားခဲ့တဲ့ သူပဲဖြစ် ပါတယ်။
လူထု လှုပ်ရှား မှုတွေမှာ ပါဝင်ရင်း ၅၀၅(က)ဖြင့် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံရမယ့် သူတွေ ထဲတွင် ပါဝင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ြ ပီး ဧပြီလ (၁၅)ရက်နေ့ တွင် သူမရဲ့အိမ်တွင် ဖမ်းဆီး အရေးယူ ခံလိုက်ရတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင် ရက်ပိုင်းကဆိုရင် ပိုပို နဲ့ ပက်သက်ပြီး ကောလဟာလ တွေက ထွက် ရှိနေတာ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့အိမ် ကလည်း အခုချိန်ထိ ဘယ်ရောက်လို့ ရော က် မှန်းမ သိသေးတာကြောင့် မမှန်တဲ့ သတင်းတွေကို မတင် ကြဖို့ တောင်းဆိုထား တာလည်း တွေ့ရပါ တယ်။
ဒီနေ့ မှာတော့ သူမရဲ့သူ ငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် Hu Go က “မပို အင်းစိန်ထောင် ရောက်ပြီလို့ မိသားစုထံမှ သိရကျန်း မာပါ စေအမ 🙏”ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်တွင်တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။”ကျန်း မာရေးမခြေ အနေတော့ မသိရသေးဘူး! သိရရင်ပြန် မျှဝေပေးပါ့မယ်!
But သူက ဘုရားတ ရားသမားဆိုတော့ Will Power ကောင်းတယ်! အဲ့တော့ I HOPE So သူဒီဒဏ်ကို အသာလေးကျော် လွှားနိုင်မှာ ပါ! သူအ တွက်လဲ ဆုတောင်းပေးကြပါအုံး🖤”လို့ သူရဲ့ပို့စ်အောက်တွင် ပရိသတ်တွေသိအောင် ထပ် ပြီးရေးသား မျှဝေထားတာ ဖြစ်ပြီး ပိုပိုရဲ့ ပ ရိသတ်ေ တွကလည်း ကျန်းမာရေးေ ကာင်းမွန်ပြီး အမြန်ဆုံး လွ တ်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။